Senior Production Manager Archives - Glory Assumption Space
Senior Production Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / လပွတ္တာမြို့
Location in : လပြတၱာျမိဳ႔
Senior Production Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / လပွတ္တာမြို့ ။ • Degree in technology management industry . • Bachelor’s degree in technology related field . • At least 8 years of experience in related field and managerial position . • Knowledge on food processing ( HACCP , GMP , ISO , and etc ) . • Good mathematical analysis • Possess good interpersonal and communication skills • Strong analytical skill with the ability to work independently and meet tight reporting deadlines • Possesses self-initiative and assertive , able to communicate with people of all levels • Good Communications skills with fluent English & willing to travel • Can stay in Labutta division • Company will provide the accommodation and meal , if you are not from Labutta . GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လေ ျာက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ ျာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )